02/02/2018 - Page 4 sur 4 -
EPP Romuald Toamasina : Mpianatra 325 nahazo tohana ara-tsakafo
Mpianatra 325 avy amin’ny ambaratonga fototra ao amin’ny sekoly Romuald ao Toamasina no nahazo tohana ara-tsakafo avy amin’ny fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny ORN, na ny ofisim-pirenena ho an’ny fanjarian-tsakafo sy ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Izay hetsika fiahiana …Tohiny
Maro ny fanakianana, tsy latsa-danja amin’izany koa ny fandotoana an’i Madagasikara any ivelany any amin’ny alalan’ny tambazotran-tserasera. Tsy vitsy ireo mihinana amam-bolony, tsy manadihady ny tena zava-misy marina eto amin’ny firenena, fa mionona amin’ireo filazam-baovao …Tohiny
Mazava, ary nahitsy ny nambaran’ ny filohan’ ny antenimieran-doholona mahakasika ny lafin’ny fampihavanana raha nihaona tamin’ny filohan’ ny CFM Maka Alphonse sy ireo mambran’ ny fampihavanana ny tenany omaly tetsy Anosy, mazava tokoa mantsy ny …Tohiny
«Mpanome lesona !»
Hitsingerina amin’ny alarobia ho avy izao ny datin’ny 7 febroary nampandriaka ny rà teny Ambohitsorohitra. Mbola tsy mazava ny tena marina manodidina iny zava-doza iny hatramin’izao. Raha ny resaka sy ny ampamoaka an-kolaka na mivantana …Tohiny